Ahoana No Hiarovan’i Venezoelà Tsara Ny Zon’ireo Vazimba Teratany? Anontanio Fotsiny Ny Vondrom-piarahamonina Warao. · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Danica Jorden
Voadika ny 05 Janoary 2016 16:00 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Français, Español
Na eo aza ny satan-dry zareo hita hatrany eny anatin'ny politikan'ny governemanta Venezoeliana, miaina anaty fahantràna lalina ireo vondrom-piarahamonina indizena toy ny Warao—lavitra azy ny fahafahana hahazo ireo zo fototra, toy ny fiahiana ara-pahasalamàna. Sary an'ny mpanoratra.
Avy aminà fanadihadiana nataon'i Minerva Vitti ny dika voalohany tamin'ity lahatsoratra ity, ary navoakan'ny gazetiboky SIC ao Venezoelà.
“Zon'ireo vahoaka teratany ny hanana fiahiana ara-pahasalamàna ankapobeny izay mandray ho anaty kajikajy ny fomba fanao sy ny kolontsain-dry zareo,” hoy ny fivakin'ny Antoko faha-VIII ao amin'ny Lalàmpanorenan'ny Repoblika Bolivariana ao Venezoelà. “Ankatoavin'ny fanjakàna ny fomba fitsaboana nentindrazan'izy ireo sy ireo fitsaboana famenony, arahana fepetra “bioéthiques” .
Ireo ambony ireo dia mitarika hoe tsy maintsy ampifanarahana amin'ny kolontsaina manavaka azy manokana sy ny filàn'ny vahoaka indizena tsirairay avy ny tolotra fiahiana ara-pahasalamàna. Tsy io irery no toerana ahitàna io fanomezantoky io. Hita ihany koa amin'ny endrika isankarazany any anatin'ny savaranonandon'ny lalàmpanorenana sy ny Lalàna Fototra ho an'ny Vahoaka Indizena io, hatramin'ny Fifanekena 169 ao amin'ny Lalàna Iraisampirenena momba ny Asa mifandraika amin'ireo Vahoaka sy Foko Indizena any amin'ireo Firenena Mahaleotena, izay nosoniavin'i Venezoelà tamin'ny 2002.
Na izany aza anefa, voatohintohin'ireo manampahefana ny zon'ireo indizena hahazo fiahiana ara-pahasalamàna raha jerena ireo tsy fahombiazana maro avy amin'ireo toeram-pitsaboana (klinika) any amin'ireo vondrom-piarahamonina 345 izay mifangitra ao amin'ny helodrano Orinoco, faritra atsinanan'ny firenena.
Ao anatin'io faritra io no misy an'i San Francisco de Guayo, any amin'ny fari-piadidian'i Antonio Díaz ao amin'ny fanjakan'ny Delta Amacuro. Any no afaka ahitàna ny vahoaka indizena faharoa betsaka indrindra ao Venezoelà, ny vahoaka Warao, izay manome ny 7 isanjaton'ny mponina teratany ao Venezoelà, aorian'ireo 58 isanjato izay avy amin'ny vahoaka Wayuu any amin'ny fanjakàna Zulia, faritra andrefan'ny firenena.
Olan'ny Hopitaly sy ny Tolotra Ara-Pahasalamàna
Miantehitra amin'ny hopitaly ambanivohitra “Hermana Isabel López” ity vahoaka misy olona eo amin'ny 3.000 ity, toerana ahitàna mivandravandra mazava tsara ny olana amin'ny fiahiana ara-pahasalamàna ireo vondrom-piarahamonina indizena ao. Efa ho volana maro lasa izao no maty ireo vondrompihary herinaratra ao amin'ny hopitaly ary tsy mbola tanteraky ny ao Venezoelà ny fangatahana mba hanamboarana azy ireo noho ny olan'ny fanafàrana entana ho an'ireo karazana fitaovana samihafa mampiasa herinaratra. Mahatonga ilay faritra hiankin-doha amin'ireo mpiasa avy any andrenivohitra io, izay tena tsy ara-dalàna ny fotoana fanatanterahany asa.
20 andro lasa eo ho eo izao, iray tamin'ireo mponina ao amin'ilay faritra no nitatitra fa efa 20 andro zareo no tsy nanana herinaratra. Jiro fanala no ampiasain'ireo mpitsabo hiatrehana ny vonjitaitra, ary mazàna no misy ankizy maty, noho ny soritraretina ateraky ny fitrohana meconium, izay mahafaty ireo zaza vao teraka satria voatrokan'izy ireny ny diky voalohany navoakany nandritry ny fahaterahany. Sady koa, im-betsaka no maty ireo jiro ao amin'ny hopitaly mandritry ny fampiterahana.
Nadika ho fahafatesan'ireo vahoaka indizena marobe ao amin'ny vondrom-piarahamonina Warao ny fahampian'ny fitaovana manjo ireo hopitaly. Iray amin'ireny ilay lakana fitaterana marary ao amin'ny reniranon'i Guayo, làlana tokana hitondràna ireo marary mila fitsaboana maika ho any amin'ny hopitalin'ny renivohitra. Sary an'ny mpanoratra ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Simba ihany koa ilay làkana mpamonjy voina an'ny hopitaly. Indray mandeha izay, zazakely enimbolana tratry ny aretim-pivalanana mahery vaika no tsy maintsy hoentina ho any amin'ny hopitalin'i Tucupita, làlana maharitra ora dimy (miankina amin'ny tanjaka soavalin'ny milina sy ny setry avy amin'ny rano). Tsy afaka natao ilay famindran-toerana ary dia voatery niala maina ilay mpitsabo sy ny fianakaviana. Tranga iray hafa nahatafiditra zazalahy Warao iray tratry ny aretin-tratra – tioberkilaozy- izay maty rehefa tsy afaka nafindra terana ho any Tucupita, renivohitry ny fanjakàna.
Efa niharan'ny tsy fisian'ny fitaovana fitsaboana ihany koa ny hopitaly Hermana Isabel López . Anisan'ireo fitaovana marobe tsy ampy ny Yelco ho an'ny fitsaboana ankizy, karazana “catheter” atsofoka anaty nofo na lalandrà hakàna rà, hampidirana fanafody, na hanesorana tsiranoka. Ho solony, voatery mampiasa ireo Yelco natao ho an'ny olondehibe ny dokotera, miteraka fanaintainana tsy laitra ho an'ireo ankizy, na indraindray aza mahatsindrona ny taolany mihitsy. Na izany aza, tsy misy vahaolana hafa ho an'ny tranganà fahaverezan-drano be loatra, izay mety hahafaty ny vokany. Fanafody iray hafa sarotra tadiavina ny menaka misy solifara natao ho fanosotra, izay tena zavadehibe amin'ny fifehezana ny hàtina (gale) Norveziana na ny hàtina tsotra — zavatra iray mahazatra ao amin'ilay faritra.
Fanampin'izany rehetra izany, maty tamin'ny Oktobra 2014 ilay vata fampangatsiahana natao hitahirizana fanefitra, nitondra ho amin'ny tsy fahafahan'ireo ankizy hatao fanefitra intsony. Araka ny voalazan'ny mponina iray avy ao San Francisco de Guayo:
Tsy manome na dia fanafody eto aza ry zareo, nefa mahay tonga rehefa injay haka ny vatonao […]. Tsy manana akory izahay na dia herinaratra hitahirizanay sakafo aza, nefa tena azoko antoka fa ho avy [izany mandritry] ny fifidianana saingy aorian'izay [tsia] . Nampanantena ny governora fa hazo fitaovana iray fitaterana an-drenirano ho an'ireo marary sy ny vondrom-piarahamonina saingy hatreto tsy mbola nisy zavatra hita […] Raha ireo mpitarika anay indizena ihany aza no tsy miraharaha ireo rahalahinay, ahoana no hiraharahàn'ny hafa anay?
Miverina ny toejavatra tahaka izany ao amin'ny Toerampitsaboana Dr. Luis Gómez, ao amin'ny vondrom-piarahamonina Nabasanuka (ary koa any amin'ny helodrano Amacuro), tany izay nitondra ho amin'ny fitomboan'ny taham-.pahafatesana teo amin'ireo Warao ny tsy fahampian'ny fitaovana hitsaboana sy ny tsy fisian'ny fitaterana an-drenirano ireo marary. Ny fanafody mba hita any dia izay nentin'ireo mpitsabo eny ambanivohitra sy ireo mpianatra ho mpitsabo izay niasa mba hahazo azy ireny tamin'ny alàlan'ny tolotànana: “rehefa tsy ho tonga teto izy ireny, tsy nisy na inona na inona ” hoy ny iray tamin'ireo mpanampy mpitsabo.
Araka ny lazain'ny mpitarika sady solontenan'ilay vondrom-pirahamonina, Mr. Conrado Moraleda, ny tranga akaiky indrindra izao dia nahitàna reny iray efa tena anaty hamehana ny hiterahany. Tsy afaka natao ny hamindràna azy avy hatrany, satria tsy nisy fitaterana azo noraisina. Vokany, samy maty na ny reny na ny zaza.
Loza Mitatao Ho An'ny Foko
Anaty fotoana mahartra, ny fijalian'ireo vondrom-piarahamonina dia afaka jerena ho toy ny loza mitatao henjana nefa misoko mangina. Mametraka ireny vahoaka ireny sy ny fahalalàny nentin-drazany ho tandindonin'ny faharinganana hatrany ny tsy fisian'ny politika mahomby momba ny vahoaka amin'ny resaka fiahiana ara-pahasalamàna. Amin'izany koa, ireo tsy fahampiana iainan'ireny vondrom-piarahamonina ireny koa dia mifamatotra aminà olana hafa miainga avy aminà loharano iraisana, famoronana endrika mahamenatra iraisan'ny rehetra amin'ireo vondrom-piarahamonina indizena hafa ao Amerika Latina.